ကလေးများနှင့်အတူအဲဂုတ္တုပြည်၌ | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | အဲဂုတ္တုပြည်၌, ကလေးများနှင့်အတူခရီးသွားလာ
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာကိုမဆိုကလေးတွေနဲ့အတူသွားလို့ရပါသလား။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာစွန့်စားခန်းစွန့်စားရသောမိသားစုများရှိသည်။ သို့သော်အန္တရာယ်များကိုမရှာဖွေသောမိသားစုများလည်းရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်ကလေးမဆိုစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအံ့ဖွယ်နေရာများရှိသည်။ ဥပမာ၊ အီဂျစ်။ သင်ဝံ့ ကလေးများနှင့်အတူအဲဂုတ္တုပြည်သို့ခရီးသွားလာ?
ငါ ၁၀ နှစ်အရွယ်မှာပိရမစ်တွေ၊ ဘုရားကျောင်းအပျက်အယွင်းတွေကိုနှစ်သက်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကိုငါအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်၊ အာဖရိကနိုင်ငံအကြောင်းတတ်နိုင်သမျှဖတ်ပြီးငါရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်ဖြစ်ဖို့အိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ ကလေးတော်တော်များများဟာအီဂျစ်ကိုချစ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ အီဂျစ်ကိုကလေးတွေနဲ့အတူသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ ဘယ်လို၊ ဘယ်အချိန်နဲ့ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ကြည့်ရအောင်။
အီဂျစ်ကိုကလေးများနှင့်အတူစဉ်းစားသောအခါစိတ်ထဲပေါ်လာသည့်ပထမဆုံးမေးခွန်းများသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာလမ်းလျှောက်လျှင်၊ လက်လွတ်မသွားသောအရာ၊ အကောင်းဆုံးရာသီဥတု၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်။
စတင်ရန် သင်ရက်စွဲရွေးချယ်ဖို့ရှိသည် နှင့်ခရီးသွားများအတွက်ကြောင်းသဘောတူသည် သွားဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကအောက်တိုဘာမှAprilပြီလကြားဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလတွင်ရာသီဥတုသည်နွေးထွေးနေဆဲဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအနှံ့တွင်မလွှမ်းမိုးနိုင်ပါ ဒီဇင်ဘာလနှင့်ဇန်နဝါရီလများသည်ခရီးသွား months ည့်သည်အများဆုံးလများဖြစ်သည် နှင့်လူအများကြီးလည်းအဆင်ပြေဖြစ်ရှိပါတယ်။ နွေရာသီဟာအထူးသဖြင့်သြဂုတ်လအလယ်လောက်မှာမှေးမှိန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒါကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်အဲဂုတ္တုပြည်သို့သွားရန် ဗီဇာလိုအပ်သည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောနိုင်ငံနှင့်သဘောတူညီမှုမည်သို့ရှိကြောင်းစစ်ဆေးရမည်။ လေဆိပ်မှာတရားဝင်ဗီဇာရှိတယ်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေအတွက်ရက် ၃၀ နဲ့ငွေသားပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်သတိထားပါ၊ အကယ်လို့သင်ကဒီစက်ရုံကိုအချို့တိုင်းပြည်တွေအတွက်ဖွင့်ထားတယ်၊ ကုန်းကြောင်းသို့မဟုတ်ရေကြောင်းဖြင့်ရောက်ရှိလာပါကဗီဇာကြိုတင်စီစဉ်ထားရမည်။
ပိုက်ဆံအကြောင်းပြောခြင်းအဲဂုတ္တုသည်စူပါခရီးသွား country ည့်နိုင်ငံဖြစ်သည် အကြွေးဝယ်ကတ်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံသည်သို့သော်သင်မူကား၊ သင်ယုံကြည်ရန်မလိုသောကြောင့်အီဂျစ် liras ကိုလက်ကိုင်ထားခြင်းကိုမရပ်ပါနှင့်။ အီဂျစ်သည်ခရီးသွားရန်လုံခြုံသောတိုင်းပြည်လား၊ အမေသည်ကလေးများနှင့်တစ် ဦး တည်းနေနိုင်သည်။ ဒါဟာမွတ်စလင်နိုင်ငံပါ။ ကျွန်မမှာအချိန်သိပ်မပေးရသေးတဲ့သူငယ်ချင်းများရှိတယ်၊ ခင်ပွန်းများနှင့်အတူအနားမှာရှိနေ
ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတွေ့အကြုံများအဲဒီမှာရှိပါတယ် အဘယ်သူမျှမပိုလျှံကြိုတင်ကာကွယ်ရေးရှိပါတယ် (အထူးသဖြင့်အဝတ်နှင့်ပတ်သတ်လျှင်ဆိုလိုသည်မှာခြေထောက်များ၊ ပခုံးများကိုဖုံးအုပ်။ အလွန်လွတ်လပ်သောအရာများ) ။ ဒါပါ အီဂျစ်နည်းနည်းပိုပြီးရှေးရိုးစွဲဖြစ်ပါတယ် အခြားမြောက်အာဖရိကနိုင်ငံများထက်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ထိုင်ခုံခါးပတ် (သို့) ကလေးထိုင်ခုံများတွင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုသင်မမျှော်လင့်သင့်ပါ။ သင်၌ရှိသည်ကိုလည်းအကြံပြုလိုသည် အစားအစာနှင့်အတူသတိထားပါ အခြားနိုင်ငံများ၌ရှိသလောက်သန့်ရှင်းမှုမရှိပါ။ ကလေးငယ်များကို ၀ မ်းလျှောခြင်းသို့မဟုတ်အော့အန်ခြင်းမှမခံစားစေလိုပါက၎င်းကိုသတိထားပါ။
ဤသည်ကိုဂရုစိုက်ရန်သို့မဟုတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လေးစားမှုရှိသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်သင့်အတွက်၊ ဤတစ်ခုမှာ၊ ကလေးများအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှိသည်။ ငါပြောချင်တာကတော့ ကလေးငယ်များသည်နိုင်ငံသို့မလာမီအီဂျစ်အကြောင်းလေ့လာရန်အလွန်အကြံပေးသည်ဖတ်ရှုခြင်း၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ၊ ကာတွန်းများပင်။ သင်၏နိုင်ငံရှိအီဂျစ်ဘဏ္treာများရှိသည့်ပြတိုက်သို့လည်ပတ်ရန်ပင်အကြံပြုသည်။ သငျသညျသိချင်စိတ်ကိုနှိုးဆွနှင့်သူတို့ကိုသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့ရှိသည်, သူတို့ရဲ့ကန့်သတ်မှုပင်သူတို့တတ်နိုင်သမျှ အနာဂတ်ခရီးစဉ်ကို contextualize ။
ကောင်းပြီ, ငါတို့ဒေသများအကြောင်းပြောနေတာကနေစတင်နိုင်ပါသည်: ကိုင်ရို၊ တောင်ဘက်တွင်ဗလဲလ်ဒဲလ်နီညို၊ အနောက်ဘက်တွင်သဲကန္တာရ၊ ပင်လယ်နီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီသည်ကိုယ်ပိုင်ကမ်းလှမ်းခြင်း၊ ကလေးသူငယ်များနှင့်အတူခရီးသွားသည့်အခါစိတ်ကူးသည် လွှမ်းမိုးဖို့မရောနှောပါစေ သမိုင်းများလွန်းသောကလေးများ၊ ပြတိုက်များများ၊ ယဉ်ကျေးမှုအလွန်များပြားခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးတစ် ဦး ၏သိလိုစိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်သူ့ကိုပျော်ရွှင်စရာဖြစ်စေနိုင်သည်။
နိုင်းမြစ်ဝှမ်းမှာရှိတယ် ဘုရားကျောင်း နှင့်ကြီးမားသောနှင့်ရွှေသဲကန္တာရထဲမှာ, မြစ်တလျှောက်လမ်းလျှောက် ခုံများနှင့်ကုလားအုတ်စီးနှင့်ပင်လယ်နီကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်ရွေးချယ်စရာဖြတ်သန်း ရေတံခွန်။ ဤနေရာတွင်သင်သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်တန်းပို့ချသူများနှင့်သာသွားပြီး၊ အာမခံထားသည့်အရာနှင့်မည်သည့်အရာကိုစစ်ဆေးသည်၊ နေရောင်ကာကွယ်ဆေးများစွာရရှိထားပြီးအီဂျစ်သို့ရောက်ပြီးနာရီပိုင်းအတွင်းရေငုပ်ခြင်းမပြုသင့်ပါ။
သဲကန္တာရ၌တည်ရှိ၏ Siwa အိုအေစစ်ကလေးငယ်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဝေလငါး၏ရှေးဟောင်းကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများကိုလည်းတွေ့နိုင်သည် Wadi Al Hittan သို့မဟုတ် Luxor ၏အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှကုလားအုပ်စီး။ သင်၏ကလေးငယ်များဤအရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သလော
ကောင်းပြီ၊ ဂရိတ်ပိရမစ်, သငျသညျ claustrophobic မဟုတ်လျှင်, အတွင်း၌သင်ခမ်းနား၏ခန်းမလှည့်လည် အီဂျစ်ပြတိုက် အားလုံး၎င်း၏ဘဏ္treာကိုအတူသို့မဟုတ်၏ Mummies ကိုမြင်လျှင် Mummification ပြတိုက်သံသယမရှိဘဲသူတို့မေ့သွားနိုင်တဲ့အရာ။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ပိရမစ်သွားရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါ အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းနှင့်လမ်းပြခြင်းနှင့်သွားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ရောင်းချသူအမြောက်အများရှိနေသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အမင်းလွှမ်းမိုးနေပြီးသင်ကကလေးများအားစိတ်လှုပ်ရှားစွာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးသင်အားငွေတောင်းသူတိုင်းကိုဘာမှမပေးဆောင်ရန်ကြိုးစားသည်။ အားလုံးတစ်ချိန်တည်းမှာ။
the ည့်လမ်းညွှန်ခရီးစဉ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သူတို့အတွက်ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ကုလားအုတ်စီးစီးခြင်းကိုစီစဉ်နိုင်သည်ကိုသေချာစေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အရာရာတိုင်းကိုသင်ပေးချေပေမယ့်သင်ဟာပေးဆပ်ခြင်းနှင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့။ The ပူပြင်းတဲ့လေပူဖောင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ် သူတို့ဟာသင် Luxor ကိုသွားတဲ့အချိန်ရဲ့အစီအစဉ်ပါ။ သူတို့လုံခြုံနေလား။ ငါဘာသိလဲ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်ယောက္ခမများပြုခဲ့ပြီးပါပြီ။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကလူတစ်ယောက်ပြိုကွဲသွားသည်၊ ကျောက်တုံးကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်…ဒါဟာသင့်အပေါ်မှာမူတည်သည်။
သူတို့ကိုလည်းaသို့ထည့်နိုင်သည် စီးပါ feluccaကိုင်ရို၊ Luxor သို့မဟုတ် Aswan တွင် ၀ င်ရောက်နိုင်သောနိုင်းလ်လှေသည်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်နေဝင်ချိန်တွင်ပိုကောင်းသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအတန်းအစားတန်တာသို့ရထား၊ ပင်လယ်နီကမ်းခြေတွင်မိသားစုတစ်စုလုံးလမ်းလျှောက်နိုင်၊ စူးအက်တူးမြောင်းကိုသိကျွမ်းပါ Port Said မှကြည့်ရှု။ ကြီးမားသော၊
ဒီလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုကလေးတွေနဲ့တိတ်တဆိတ်လုပ်နိုင်တယ်၊ မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းငါရင်ပြင်တွေ၊ အပန်းဖြေဥယျာဉ်တွေဒါမှမဟုတ်ဈေးဝယ်စင်တာတွေအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ ကလေးတို့နဲ့အတူအီဂျစ်ကိုသွားတာကနောက်တစ်ခုပါ။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသည်, ဒစ္စနေးမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်း ကလေးများနှင့်အတူအီဂျစ်သို့သွားခြင်းသည်ဘေးကင်းပါသလား။ ခိုင်လုံသောအဖြေ (၃) ခု - ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါအမှန်ပဲ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလကလူကြိုက်များသောခရီးသွား route ည့်သည်လမ်းကြောင်းတွင်ဗုံးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့သည်၊ သို့သော်လူတို့သည်အမြဲတမ်းသွားလာကြသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အဖြေမှာ မူတည်ပါတယ်။
၎င်းသည်သင်တွေ့ကြုံခံစားလိုသောအရာပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်တိုင်းပြည်၏နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်သည်။ ဤအချက်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းသည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ငါဂျပန်ကိုငါးကြိမ်ရောက်ဖူးတယ်၊ တိုကျိုကစောင့်နေတယ်ဆိုတာငါ့နှမကအမြဲပြောတယ် graaannnn မြေငလျင်။ ငါအတူတူသွားပါ။ ငါသည်ငါ့လက်ချောင်းကိုဖြတ်ကူးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးယူ။ , ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးပါတယ်။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာဖရိကတိုက် » အဲဂုတ္တုပြည်၌ » ကလေးများနှင့်အတူအဲဂုတ္တုပြည်၌